Weerar Saraakiil Lagu Dilay Oo Ka Dhacay Gobalka Qandahaar. – Bogga Calamada.com
Weerar Saraakiil Lagu Dilay Oo Ka Dhacay Gobalka Qandahaar.
May 19, 2017 5:25 am Views: 85
Wararka ka imaanaya dalka Afghanistan ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay weerar culus oo loo adeegsaday dagaal toos ah iyo qaraxyoÂ lalabeegsaday xarumo ciidan oo maamulka daba dhilifka Kaabul ka sameystay degmada Macruuf ee gobalka Qandahaar.
Weerarkan culus waxa uu sigaar ah kaga dhacay deegaanka Isxaaq Zuu oo ka tirsan degmada Macruufâ€™iyadoona weeraradan oo qeyb ka ah xamlo dagaaleedka Al-mansuuriyah ay qaadeen ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan.
Ciidamada Mujaahidiinta ayaa weerarkan u adeegsaday hubka culus iyo midka fududâ€™waxey sidoo kale ciidamada Mujaahidiinta weerarkan culus u adeegsadeen ilaa Boqol Bam gacmeedyo ah kuwaasi oo jawiga goobta u badalay jawi qaraxyo ah.
Webseydka Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa qoray in weerarkan lagu dilay Sagaal xubnood oo ay ku jiraan saddex sarkaal oo lagu kala magacaabo 1-Cabdi Jabbaar 2- Baarik 3-Daryaabâ€™sidoo kale weerarkan waxa lagu dhaawacay Saddex xubnood oo uu ku jira taliyihii saldhiga la weeraray kuwaasi oo gabi ahaantooda ah saraakiil muhiim u ahaa maamulka daba dhilifka Ashraf Cali Gani.
Ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa dardar galiyay weerarada qeybta ka ah Xamlada Al-mansuuriyah ee ay ka fulinayaan goobaha ay ku suganyihiin maamulka daba dhilifka Afghanistan iyo kuwa Kufaarta NATO.